Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Gates uye Wellcome Pledge US$300 Mamirioni yeCOVID-19 Mhinduro
Nheyo dzinodaidza vatungamiriri venyika kuti vatsigire Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) kubatsira kupedza dambudziko reCCIDID-19, kugadzirira denda remangwana, uye kugadzirisa kutyisidzira kwedenda.
Nhasi Bill & Melinda Gates Foundation neWellcome vavimbisa US$150 miriyoni imwe neimwe inosvika US$300 miriyoni kumubatanidzwa weCoalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), mubatanidzwa wepasi rose wakatangwa makore mashanu apfuura svondo rino nehurumende dzeNorway neIndia. Gates Foundation, Wellcome, uye World Economic Forum. Zvipikirwa izvi zvinouya pamberi pemusangano wepasirese wekuzadzazve muna Kurume kutsigira chirongwa cheECPI chemakore mashanu kugadzirira zvirinani, kudzivirira, uye kupindura zvakaenzana kune ramangwana uye denda.
Kubva payakavambwa, CEPI yakaita basa repakati resainzi mukumisa denda pasirese, kutarisa huwandu hwebudiriro yesainzi uye nekuisa gadziriro yedenda pakati pehurongwa hwehutano hwepasi rose R&D. Pakatanga denda reCCIDID-19, CEPI yakapindura nekukasika, ichivaka imwe yenzvimbo dzakakura uye dzakasiyana siyana dzevanodzivirira vaccine veCCIDID-19, gumi nemana pamwe chete, kusanganisira vatanhatu vacho vari kuramba vachiwana mari, uye vatatu vacho vakapihwa emergency. shandisa rondedzero neWorld Health Organisation (WHO).
CEPI yakaita mari yekutanga mukuvandudza kweOxford-AstraZeneca COVID-19 yekudzivirira, iyo yave kuponesa hupenyu pasi rese. Mwedzi wapera, Novavax's protein-based COVID-19 vaccine - inotsigirwa zvakanyanya neCEPI - yakagamuchira WHO rondedzero yekushandisa nekukurumidza uye yakagadzirira kubatsira kuedza kudzora denda pasi rose. Anopfuura bhiriyoni imwe yemadhora ekudzivirira kweNovavax ave kuwanikwa kuCOVAX, danho repasi rose rinotungamirwa neCEPI iro rine chinangwa chekuunza mukana wakaenzana kuCOVID-1 vaccine. CEPI zvakare inoenderera mberi nekushanda pachizvarwa chinotevera COVID-19 vaccine, kusanganisira "variant-proof" COVID-19 vaccine uye mapfuti anogona kudzivirira kubva kune ese makoronavirus, zvichigona kubvisa kutyisidzira kweiyo ramangwana coronavirus denda.
Kupfuura COVID-19, CEPI yakazadza gaka rakakosha mukutsigira vaccine equity padivi peR&D. CEPI parizvino iri kutsigira kutsvagisa nekuvandudzwa kwemishonga inogoneka yekurwisa zvimwe zvirwere zvinotapukira, kusanganisira majekiseni ekutanga kusvika pakuedzwa kwekiriniki kurwisa hutachiona hweNipah neLassa. Sangano iri rakaitawo basa rakakosha mukuyedza kupedza Ebola, kusanganisira kutsigira kugadzirwa kwechipiri chekudzivirira Ebola naJanssen. Pamusoro pekusimudzira sainzi iri pasi pekuvandudzwa kwejekiseni uye mapuratifomu matsva ekudzivirira, CEPI yakatarisana nekudzikisa zvakanyanya nguva yainotora kugadzira majekiseni anoponesa hupenyu kubva kune chero njodzi itsva yehutachiona (inonzi "Chirwere X") - mukati memazuva zana kubva pathogen. kutevedzana. Izvi zvinomiririra musanganiswa wechiyero nekumhanya izvo zvinogona kuponesa mamirioni ehupenyu uye mabhiriyoni emadhora.
Denda iri rawedzera mumafungu pasirese, richiratidza basa rakakosha remasangano epasi rese seECPI anoisa kuwana kwakaenzana padanho rechinangwa chavo. Nguva ichangoburwa kubva kuNortheastern University inoratidza kuti kuve nekuwanikwa kwemishonga munyika dzine mari yakaderera seKenya kwakafanana neiyo munyika dzine mari yakawanda seUK kana US, makumi manomwe muzana ekufa kweCCIDIDID-70 kusvika parizvino zvingadai zvakadziviswa.
United Kingdom ichaita musangano wekudzokorodza weECPI munaKurume 8, 2022, muLondon. Chiitiko chekutsvaga mari chichaunganidza hurumende, philanthropists, uye vamwe vanopa kuti vatsigire chirongwa cheECPI chemakore mashanu chekugadzirisa njodzi yedenda nedenda, zvinogona kudzivirira mamirioni ekufa uye mabhiriyoni emadhora mukukuvara kwehupfumi.
Covid-19 COVID-19 dambudziko Ebola utano Kenya Noweyi Sangano United Kingdom World Health Organization
New Orleans Mardi Gras: Kukosha kweCOVID Vaccinations uye Boosters
Vazhinji vatsva vekuUkraine maIsrael: Wow!
Angiographic Catheters Musika Iyezvino uye Ramangwana...